သာမန်အသင်းတစ်သင်းနဲ့ အဓိက ဆုဖလားရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ နည်းပြများ အပိုင်း(၃)
26 Nov 2018 . 3:59 PM
ဘောလုံးလောကမှာ နည်းပြတစ်ဦးရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ဘယ်လောက်အရေးပါလဲဆိုတာ အထွေအထူး ပြောစရာလိုမယ် မထင်ပါဘူး။ အသင်းအတွက် သင့်တော်မယ့် နည်းဗျူဟာ ချမှတ်ရမယ့်အပြင် ကစားသမားရွေးချယ်မှုအပိုင်း၊ ပွဲတစ်ပွဲရဲ့အလှည့်အပြောင်းကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိရမှာပါ။ ငွေကြေးအင်အား တောင့်တင်းတဲ့ အသင်းတစ်သင်းနဲ့ ဆုဖလားအောင်မြင်မှုရယူနိုင်တာထက် သာမန်အသင်းတစ်သင်းအတွက် အဓိက ဆုဖလားရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ နည်းပြဆိုရင် ပိုပြီး အထင်ကြီးလေးစားစရာကောင်းနေပါတယ်။ အလယ်အလတ်အသင်းကို ကိုင်တွယ်ပြီး သမိုင်းဝင် အောင်မြင်မှုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ နည်းပြဆိုတာ လက်ချိုးရေလို့တောင် ရတယ်။ ဒါကြောင့် သာမန်အသင်းတစ်သင်းနဲ့ ဆုဖလားရယူခဲ့တဲ့ နည်းပြတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် ရွေးချယ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
ယူရို-၂၀၀၄ မှာ ဂရိအသင်း ဗိုလ်စွဲမယ်လို့ ဘယ်သူများထင်ခဲ့ကြလဲ။ ဒါပေမဲ့ Nothing is Impossible ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပဲ ဂရိအသင်းဟာ အင်အားကြီးပြိုင်ဘက်တွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ယူရိုချန်ပီယံဆု ကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်တဲ့ အေသင်သားတွေကို ဦးဆောင်ခဲ့သူက ၀ါရင့်နည်းပြကြီး အော့တိုရီဟာဂယ်လ် Otto Rehhagel ပါပဲ။ သူ့ရဲ့ ခံစစ်အသားပေး နည်းဗျူဟာ၊ One Goal Enough ဖလော်ဆိုဖာက အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အဲဒီနောက်ပိုင်း ဘောလုံးလောကမှာ Defensive Tactic ဗျူဟာက တစ်ခေတ်ဆန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ ရီဟာဂယ်လ်ဟာ Fortuna Düsseldorf ၊ ၀ါဒါဘရီမင်၊ ကိုင်ဇာစလော့တန်အသင်းတို့နဲ့ ဘွန်ဒစ်လီဂါ၊ UEFA Cup Winners’ Cup ၊ ဂျာမန်ဖလားတွေ ရယူခဲ့ဖူးပေမယ့် ဂရိအသင်းနဲ့အတူ ယူရိုဖလား ရယူခဲ့တာက ပိုပြီးထင်ရှားခဲ့တယ်။
အခု ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းနည်းပြ မာတီနက်ဇ် Roberto Martínez ရဲ့ နည်းပြဘ၀တစ်လျှောက် အထင်ရှားဆုံးအောင်မြင်မှုကို ပြပါဆိုရင်တော့ ၀ီဂန်အသင်းနဲ့အတူ FA ဖလား ရယူခဲ့တာပါပဲ။ ၂၀၁၂-၁၃ ရာသီမှာ ဆွတ်ခူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုမှ မထင်မှတ်တဲ့အနေအထားကနေ ချန်ပီယံဆု ကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အသင်းက အဲဒီအချိန်တုန်းက ငွေကို ရေလိုသုံးပြီး ပြင်ဆင်နေတဲ့ မန်စီးတီးဖြစ်နေလို့ပါ။ (၉၁)မိနစ်မှာ Ben Watson ရဲ့ တစ်လုံးတည်းသောဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပြီး အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံး FA ဖလားကို ကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီပွဲဟာ နှစ်ပေါင်း(၁၀၀)အတွင်း FA ဖလားဗိုလ်လုပွဲတွေထဲမှာ ကမောက်ကမရလဒ် ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပွဲအဖြစ်ပါ မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီရာသီမှာပဲ ၀ီဂန်အသင်း ပရီးမီးယားလိဂ်က တန်းဆင်းခဲ့ရလို့ FA ဖလားရပြီး တန်းဆင်းခဲ့ရတဲ့ အသင်းအဖြစ်ပါ စံချိန်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။
အီယူရေတာ Javier Irureta ဆိုတဲ့ နာမည်ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ မထင်ရှားတော့ပေမယ့် ၂၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်ကာလတွေတုန်းက စပိန်ဘောလုံးလောကမှာ မှတ်တမ်းတစ်ခု စိုက်ထူနိုင်ခဲ့သူပါ။ ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ရာသီမှာ စပိန်ဘောလုံးလောကရဲ့ ဘီလူးကြီး(၂)သင်းဖြစ်တဲ့ ဘာစီလိုနာ၊ ရီးယဲလ်တို့ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး လာလီဂါချန်ပီယံဆုကို ဆွတ်ခူးပေးခဲ့တယ်။ သူ့လက်ထက်မှာ ထရစ်စတန် Diego Tristán ၊ မက်ကိုင်း Roy Makaay ၊ နေးဘတ် Noureddine Naybet ၊ ပန်ဒီယာနီ Walter Pandiani စတဲ့ ကစားသမားတွေဟာလည်း ဘောလုံးစင်မြင့်ထက်မှာ ထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ . . သာမန်အသင်းတစ်သင်းနဲ့ အဓိက ဆုဖလားရယူခဲ့တဲ့ နည်းပြ အပိုင်း(၃)ကို ဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း(၄)ကိုလည်း ဆက်ပြီးဖော်ပြသွားမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျား . .
သာမန်အသင်းတစ်သင်းနဲ့ အဓိက ဆုဖလားရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ နည်းပြများ အပိုင်း(၁) ဖတ်ရှုရန်လင့်ခ်
သာမန်အသင်းတစ်သင်းနဲ့ အဓိက ဆုဖလားရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ နည်းပြများ အပိုင်း(၂) ဖတ်ရှုရန်လင့်ခ်
Photo:Web.de,Twitter,Evening Standard,These Football Times,
သာမနျအသငျးတဈသငျးနဲ့ အဓိက ဆုဖလားရယူနိုငျခဲ့တဲ့ နညျးပွမြား အပိုငျး(၃)
ဘောလုံးလောကမှာ နညျးပွတဈဦးရဲ့ အခနျးကဏ်ဍက ဘယျလောကျအရေးပါလဲဆိုတာ အထှအေထူး ပွောစရာလိုမယျ မထငျပါဘူး။ အသငျးအတှကျ သငျ့တျောမယျ့ နညျးဗြူဟာ ခမြှတျရမယျ့အပွငျ ကစားသမားရှေးခယျြမှုအပိုငျး၊ ပှဲတဈပှဲရဲ့အလှညျ့အပွောငျးကိုလညျး ဖနျတီးနိုငျစှမျးရှိရမှာပါ။ ငှကွေေးအငျအား တောငျ့တငျးတဲ့ အသငျးတဈသငျးနဲ့ ဆုဖလားအောငျမွငျမှုရယူနိုငျတာထကျ သာမနျအသငျးတဈသငျးအတှကျ အဓိက ဆုဖလားရယူနိုငျခဲ့တဲ့ နညျးပွဆိုရငျ ပိုပွီး အထငျကွီးလေးစားစရာကောငျးနပေါတယျ။ အလယျအလတျအသငျးကို ကိုငျတှယျပွီး သမိုငျးဝငျ အောငျမွငျမှုရယူနိုငျခဲ့တဲ့ နညျးပွဆိုတာ လကျခြိုးရလေို့တောငျ ရတယျ။ ဒါကွောငျ့ သာမနျအသငျးတဈသငျးနဲ့ ဆုဖလားရယူခဲ့တဲ့ နညျးပွတှကေို ပရိသတျတှအေတှကျ ရှေးခယျြ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
ယူရို-၂၀၀၄ မှာ ဂရိအသငျး ဗိုလျစှဲမယျလို့ ဘယျသူမြားထငျခဲ့ကွလဲ။ ဒါပမေဲ့ Nothing is Impossible ဆိုတဲ့ စကားအတိုငျးပဲ ဂရိအသငျးဟာ အငျအားကွီးပွိုငျဘကျတှကေို ကြျောဖွတျပွီး ယူရိုခနျြပီယံဆု ကိုငျမွှောကျနိုငျခဲ့တယျ။ စိတျဓာတျပွငျးထနျတဲ့ အသေငျသားတှကေို ဦးဆောငျခဲ့သူက ဝါရငျ့နညျးပွကွီး အော့တိုရီဟာဂယျလျ Otto Rehhagel ပါပဲ။ သူ့ရဲ့ ခံစဈအသားပေး နညျးဗြူဟာ၊ One Goal Enough ဖလျောဆိုဖာက အလုပျဖွဈခဲ့ပွီး အဲဒီနောကျပိုငျး ဘောလုံးလောကမှာ Defensive Tactic ဗြူဟာက တဈခတျေဆနျးခဲ့ပါသေးတယျ။ ရီဟာဂယျလျဟာ Fortuna Düsseldorf ၊ ဝါဒါဘရီမငျ၊ ကိုငျဇာစလော့တနျအသငျးတို့နဲ့ ဘှနျဒဈလီဂါ၊ UEFA Cup Winners’ Cup ၊ ဂြာမနျဖလားတှေ ရယူခဲ့ဖူးပမေယျ့ ဂရိအသငျးနဲ့အတူ ယူရိုဖလား ရယူခဲ့တာက ပိုပွီးထငျရှားခဲ့တယျ။
အခု ဘယျလျဂြီယံအသငျးနညျးပွ မာတီနကျဇျ Roberto Martínez ရဲ့ နညျးပွဘဝတဈလြှောကျ အထငျရှားဆုံးအောငျမွငျမှုကို ပွပါဆိုရငျတော့ ဝီဂနျအသငျးနဲ့အတူ FA ဖလား ရယူခဲ့တာပါပဲ။ ၂၀၁၂-၁၃ ရာသီမှာ ဆှတျခူးခဲ့တာဖွဈပွီး ဘယျလိုမှ မထငျမှတျတဲ့အနအေထားကနေ ခနျြပီယံဆု ကိုငျမွှောကျနိုငျခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရငျဆိုငျရတဲ့အသငျးက အဲဒီအခြိနျတုနျးက ငှကေို ရလေိုသုံးပွီး ပွငျဆငျနတေဲ့ မနျစီးတီးဖွဈနလေို့ပါ။ (၉၁)မိနဈမှာ Ben Watson ရဲ့ တဈလုံးတညျးသောဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့ပွီး အသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံး FA ဖလားကို ကိုငျမွှောကျနိုငျခဲ့တယျ။ အဲဒီပှဲဟာ နှဈပေါငျး(၁၀၀)အတှငျး FA ဖလားဗိုလျလုပှဲတှထေဲမှာ ကမောကျကမရလဒျ ထှကျပျေါခဲ့တဲ့ပှဲအဖွဈပါ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါသေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီရာသီမှာပဲ ဝီဂနျအသငျး ပရီးမီးယားလိဂျက တနျးဆငျးခဲ့ရလို့ FA ဖလားရပွီး တနျးဆငျးခဲ့ရတဲ့ အသငျးအဖွဈပါ စံခြိနျရေးထိုးခဲ့ပါတယျ။
အီယူရတော Javier Irureta ဆိုတဲ့ နာမညျဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ မထငျရှားတော့ပမေယျ့ ၂၀၀၀ ပတျဝနျးကငျြကာလတှတေုနျးက စပိနျဘောလုံးလောကမှာ မှတျတမျးတဈခု စိုကျထူနိုငျခဲ့သူပါ။ ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ရာသီမှာ စပိနျဘောလုံးလောကရဲ့ ဘီလူးကွီး(၂)သငျးဖွဈတဲ့ ဘာစီလိုနာ၊ ရီးယဲလျတို့ကို ကြျောဖွတျပွီး လာလီဂါခနျြပီယံဆုကို ဆှတျခူးပေးခဲ့တယျ။ သူ့လကျထကျမှာ ထရဈစတနျ Diego Tristán ၊ မကျကိုငျး Roy Makaay ၊ နေးဘတျ Noureddine Naybet ၊ ပနျဒီယာနီ Walter Pandiani စတဲ့ ကစားသမားတှဟောလညျး ဘောလုံးစငျမွငျ့ထကျမှာ ထငျရှားလာခဲ့ပါတယျ။
ပရိသတျကွီးရေ . . သာမနျအသငျးတဈသငျးနဲ့ အဓိက ဆုဖလားရယူခဲ့တဲ့ နညျးပွ အပိုငျး(၃)ကို ဖျောပွလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ အပိုငျး(၄)ကိုလညျး ဆကျပွီးဖျောပွသှားမှာဖွဈလို့ စောငျ့မြှျောအားပေးကွပါဦးခငျဗြား . .
သာမနျအသငျးတဈသငျးနဲ့ အဓိက ဆုဖလားရယူနိုငျခဲ့တဲ့ နညျးပွမြား အပိုငျး(၁) ဖတျရှုရနျလငျ့ချ
သာမနျအသငျးတဈသငျးနဲ့ အဓိက ဆုဖလားရယူနိုငျခဲ့တဲ့ နညျးပွမြား အပိုငျး(၂) ဖတျရှုရနျလငျ့ချ